Yohimbe ixolo luthathe - J & S Botanics
[Latin Name] Corynante Yohimbe [Plant Umthombo] Yohimbe ixolo aqokelelweyo Afrika [Iinkcukacha] Yohimbine-8% (solibalo) [Inkangeleko] Red Brown Fine Powder [ubukhulu Particle] 80 enemingxuma [ilahleko omiswe] 5.0% [Heavy Metal] 10PPM [ isicatshulwa pende] Ethanol [Storage] Zigcine kwindawo ebandayo & owomileyo, ugcine kude ukukhanya ngqo kunye nobushushu. [Package] Phama iphepha-igubu kunye zeplastiki-iibhegi ezimbini ngaphakathi. ubunzima Net: 25kgs / igubu [Yintoni yohimbe] Yohimbe ngumthi olukhula e-Afrika, kwaye balapho baye ...
[Igama Latin] Corynante Yohimbe
[Plant Umthombo] Yohimbe ixolo eqokelelwe eAfrika
[Iinkcukacha] Yohimbine 8% (solibalo)
[Inkangeleko] Red Brown Fine Powder
[Ilahleko omiswe] 5.0%
[Kucatshulwe pende] Ethanol
[Package] Phama iphepha-igubu kunye zeplastiki-iibhegi ezimbini ngaphakathi. ubunzima Net: 25kgs / igubu
[Yintoni na yohimbe]
Yohimbe na umthi olukhula e-Afrika, kwaye balapho baye basebenzisa amaxolo crude kunye nambaxa lihlanjululwe ukwandisa inkanuko yesini kunye nokusebenza. Yohimbe iye yasetyenziswa kangangeenkulungwane njenge aphrodisiac. Kuye bade etshaya njenge hallucinogen. Kule mihla, Yohimbe ixolo luthathe ikakhulu asetyenziselwa ukunyanga namandla amadoda kunye nabasetyhini.
Xa ongena ebantwaneni, Yohimbe ke yayingeyonxalenye kumlanjana igazi, kunye neziphumo lingasenza Yohimbe besiza ikhono layo ukwandisa kwegazi liya zangasese - kwaye oku kusebenza kuzo zombini amadoda women.Aside kwiimpembelelo zalo aphrodisiac, uphando entsha kwakhona zibonisa ukuba Yohimbe uye onamandla imiphumela antioxidant.
Yohimbe Bark Benefits Extract £ ng
1.It yeyona aphrodisiac kokubini amadoda nabafazi
2.Be kusetyenziselwa ukulwa namandla
3.It uboniswa ukuba antioxidant enamandla
4.It Kwakhona inceda ukuthintela imithambo umntu angabi kucocwe
5.It kunceda ocansini, ukwandisa yobuntu
6.Ithas kwakhona abonise ukuba ayanceda ukuthintela ukuhlaselwa yintliziyo
isixhasi Natural Ezocansi
Reishi Kwamakhowa Extract